စိတ်ကူးတည်ရာ ...: November 2012
Posted by lu bo at 8:04 PM No comments:
ဖခင်ဖြစ်သူ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မျှော်မှန်း ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒီနေ့ချိန် အထိ မတည်ဆောက်နိုင်သေးတဲ့ အပေါ်မှာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောပါတယ်။ မနေ့က လွှတ်တော် ပုံမှန် စည်းဝေးပွဲတွေ အပြီး တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေက လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဖိတ်ကြား ဧည့်ခံခဲ့တဲ့ ညစ
ာစားပွဲအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Posted by lu bo at 7:49 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 5:12 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 11:24 AM No comments:
Check out the Breaking Dawn Part2cast interview with the stunning & handsome Taylor Lautner (Jacob Black) : http://bit.ly/TKWQJC
Posted by Cali For Life at 11:20 AM No comments:
Every one today Obama and Romney they are god job because they are now united states or state is who like this two you kids Answer who you like talk me i like Obama.
the Obama say you kids want to study is school. the Romney say is you kids kill some one. you kids Answer thank you!!!!!!!!!!!! look the picture and who you kids like???
Posted by Cali For Life at 11:02 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 6:39 AM No comments:
" ငါ့ဟာမှငါ့ဟာ။ ငါ့သာသနာမှ ငါ့သာသနာဟု
Posted by Cali For Life at 6:34 AM No comments:
Posted by Cali For Life at 6:10 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ( ဂျဝါဟလာနေရူး အထိမ်းအမှတ် -အိန္ဒိယ )-ဘာသာပြန်
http://tunwai-states.blogspot.jp/2012/11/blog-post_9085.html မှ ....
မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို မိန့်ခွန်း http://m.ibnlive.com/news/full-text-of-suu-kyis-jawaharlal-nehru-memorial-lecture/305659-3.html
ဘ၀မှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြွေးရယ်......ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းရဲ့ ကျေးဇူးကြွေးရယ်ကို ဆပ်နိုင်တာလောက် စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အခါမျိုး ရှားပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်မှာ ကျမဟာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးမှာရော ကျမကိုပါ တစိုက်မတ်မတ် အားပေးခဲ့သူတွေ ၊ အစိုးရတွေ ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ခွင့်များစွာ ရခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဒီလမ်းခရီးမှာ ကြီးကျယ်တဲ့အခက်အခဲတွေ ကြုံရတိုင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ကျမတို့ ရခဲ့တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်မှုဟာ ကျမတို့ကို ရှေ့ဆက်ဖို့ အားအင်အသစ်တွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်လေ ။
Posted by lu bo at 10:03 PM No comments:
BY DARK GREEN APPLE ON THURSDAY, OCTOBER 11, 2012 AT 8:45PM
ပြောပြချင်တယ် ။ ကြားချင်ပါ့မလား စူဇန်ရေ ။
Posted by Cali For Life at 9:17 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 9:07 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:55 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:50 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:47 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:27 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:22 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:17 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 8:12 PM No comments:
Sunday, September 9, 2012 http://axeltkw.blogspot.com.au/2012/09/discography.html မှ .
All Songs and Cover Art Credit to
mgthura3 , shwelu , KTL , hiddenspider , wathan24 , balagyiaung ,
Posted by Cali For Life at 6:04 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 6:00 PM No comments:
မာန်အောင်ရတနာစေတီတော် (၀ါခင်းကုန်းဘုရား) တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်အတွက်။
Posted by Cali For Life at 5:51 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 5:37 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 5:34 PM No comments:
缅甸 翁山蘇姬 Aung San Suu Kyi speech in Norway on June 16, 2012 - YouTube.flv
Posted by Cali For Life at 5:32 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 5:09 PM No comments:
Posted by Cali For Life at 5:07 PM No comments:
Posted by lu bo at 4:38 PM No comments:
Posted by lu bo at 4:34 PM No comments:
အိုဘားမား Graffiti ပုံကို ဆွဲတဲ့ အသက်၂၀ သာရှိသေးသည့် အာကာကျော်...
Posted by lu bo at 4:06 PM No comments: